Maamulka iyo Shacabka Jowhar oo ka hortagaya Fatahaad uu sameeyo Webiga Shabelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jowhar ( Mareeg.com)-Guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Shabeelaha dhexe Max’ed Sugaal Cismaan oo Shabelle la hadlay ayaa sheegay in maamulkooda ka feejigan yahay fatahaad uu sameeyo Webiga Shabelle ee mara gobolkaas iyo saameyn ka dhalata taasoo dhibaato gaarsiisa dadka ku dhaqan Shabeelaha Dhexe.
Max’ed Sugaal Cismaan ayaa waxa uu qeexay in dadaal fara badan ay hayaan aadana ula tacaaleen sidii uusan fatahaad ku sameynin Webiga Shabelle islamarkaana cara tuur badan ay ka sameeyeen meelaha laga cabsi qabo in uu Webiga fatahaadda ka sameeyo isagoo xusay in arrintaas looga hortagayo Fatahadda Webiga oo ay iskaashadeen maamulka iyo Shacabka Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Geesta kale Guddoomiye ku xigeenka oo soo hadal qaaday ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in deegaanno badan ay Ciidamadu ka saareen Al Shabaab waxbadanna laga qabtay ammaanka wuxuuna qeexay in wacyi gelin fara badan u sameeyay maamulka Shacabka ku dhaqan Gobolka taas oo ku aadan sida ay ula shaqeyn lahaayeen Ciidamada.
Waqtiyada Deyrta oo hadda laguda galay ayaa aalaaba waxaa Fatahaado sameeya Webiga Shabelle iyadoona dadka deegaanada webigu maro degan oo duruus ka soo bartay fatahaadii hore ay sameynayaan dadaallo ka hortag ah ee fatahaadahaadaasi.